Akukho mveliso yeLaphu eliLukiweyo-iTshayina Alikho iLaphu eliLukiweyo labavelisi, abaXhasi
Ishishini lethu linyanzelisa yonke imigaqo-nkqubo esemgangathweni "yemveliso ekumgangatho ophezulu sisiseko sokusinda kweshishini; ukoneliseka kwabaxhasi kunokuba yindawo yokujonga kunye nokuphela kweshishini; ukuphucuka okungapheliyo kukusukela abasebenzi" kunye nenjongo engaguqukiyo "yedumela lokuqala , umthengi kuqala "for None Woven Fabric,,", Sibamkela ngokunyanisekileyo abathengi abavela ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba beze kuthethathethana neshishini nathi. Ngobuchwephesha obuphambili kunye namaziko, ulawulo olusemgangathweni olungqongqo, inqanaba elifanelekileyo, uncedo oluphezulu kunye nokusebenzisana okufutshane nabathengi, sizinikezele ekunikezeni elona xabiso liphezulu kubathengi bethu kwiLinen engekho yelaphu, Ukuqinisekisa umgangatho ophezulu wemveliso ngokukhetha eyona ilungileyo ababoneleli, sikwazalisekisile iinkqubo zolawulo lomgangatho olubanzi kuzo zonke iinkqubo zethu zokufumana. Okwangoku, ukufikelela kwethu kuluhlu olukhulu lweefektri, kunye nolawulo lwethu olugqwesileyo, kukwaqinisekisa ukuba sinokuzalisa ngokukhawuleza iimfuno zakho kumaxabiso aphezulu, ngaphandle kobungakanani beodolo.
imigaqo: ubunzima. 25 gsm 35 gsm 50 gsm 60 gsm 70 gsm 80 gsm okanye ngokomyalelo
Umbala: Luhlaza namhlophe
Ukupakisha: ukupakisha kwimiqulu.
Ukuhanjiswa kwezibuko: Naliphi na izibuko lase China
imigaqo: 30 gsm 40 gsm 50 gsm 60 gsm 70 gsm 80 gsm okanye ngokomyalelo.
Umbala: zonke iintlobo zombala kunye nobunzima.
Ukupakisha: ukupakisha kwimiqulu, iibhali, iibhokisi.
Ukwakhiwa: Polypropylene100% + PU
imigaqo: 60 gsm, 70 gsm okanye ngokomyalelo.
Inzuzo: Elona xabiso liphezulu, umgangatho kunye nenkonzo, ukuphendula ngokukhawuleza, ulawulo lomgangatho olungileyo.
Iimveliso zethu zokuthumela kumazwe aseYurophu, eMelika, mpuma Asia Asia, Korea, Japan, imveliso evuthiweyo, ukuthengisa kunye neqela lokuhambisa, elinokuthi lisebenzise esibhedlele, iziko lenzululwazi, intsimi yam, njl.
imigaqo: 42 gsm 50 gsm 55 gsm 60 gsm 70 gsm okanye ngokomyalelo.
Umbala: mhlophe / luhlaza / tyheli
umbala: zonke iintlobo zombala (ngokomyalelo).
ukucacisa ubunzima: ngokomyalelo.
Ukupakisha: ukupakisha kwimiqulu okanye ukusika.